सर्वश्रेष्ठ साइटहरू नि: शुल्क पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न | ग्याजेट समाचार
पाको एल गुटेरेज | | ईरेडरहरू
महामारी आराम गर्दैन, तर हामी पतन सक्दैनौं। यसका लागि हामी धेरै शौकहरू प्रयोग गर्न सक्छौं र यो सीमिततालाई केही उपयोगी बनाउन सक्दछौं, या त हामीले बाँकी रहेको ती श्रृंखलाहरू समाप्त गर्न, ती भिडियो गेमहरू सुरू नगरीकन वा केही उत्कृष्ट डिजिटल पुस्तकहरूको साथ आफूलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। यो कहिले पनि खराब समय हुँदैन संस्कृति र यसको लागि हामीसँग धेरै निःशुल्क विकल्पहरू छन्।
यदि हामीसँग छ भने ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन ठूलो स्क्रिन विकर्णको साथ, हामी हजारौं नि: शुल्क शीर्षकहरू डाउनलोड गर्न अनलाइन साइटहरूको विस्तृत विविधता लिन सक्दछौं। यो क्षणमा भौतिक पुस्तक किन्न धेरै जटिल छ भन्ने विचार गर्दै यो ठूलो लाभ होएक अनलाइन स्टोर मा तिनीहरूलाई किन्न पनि, त्यहाँ शेयर वा वितरण समस्या हुन सक्छ। यसको लागि हामी तपाईंलाई दिन लाग्दछौं उत्तम विकल्पहरू तिनीहरूलाई घरबाट र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गर्नका लागि.
1 सीमितको लागि सम्पादकीय पदोन्नतिहरू
1.4 रोका पुस्तकहरू
1.5 एर्राटा नेटुराए
2 पुस्तकहरू निःशुल्क र कानूनीका लागि पहुँच गर्न अन्य तरिकाहरू
2.3 हामी पढ्छौं
सीमितको लागि सम्पादकीय पदोन्नतिहरू
केहि सब भन्दा शक्तिशाली प्रकाशकहरु जनसंख्या संग एकता देखाउन नि: शुल्क शीर्षक को एक वर्गीकरण को पेशकश गर्दै छन्। यो जस्तो कठिन समयमा संस्कृति प्रमोट गर्न एक राम्रो इशारा छ।
यो महान प्रकाशक एक प्रदान गर्दछ यस पदोन्नति को लागी ११ पुस्तकहरुको प्याक। यसका अतिरिक्त तपाईले एउटा पाउनुहुनेछ क्यालेन्डरियो जहाँ हामी उपलब्ध केही थप पढ्ने गतिविधिहरूलाई नजिकबाट पछ्याउन सक्छौं। यस तरिकाले हामी प्रस्तावको विकासको नजिकबाट निगरानी गर्न सक्रिय रहन्छौं। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
यहाँ हामी भेट्छौं लेखकहरु द्वारा works कार्यहरु Herralde पुरस्कार, प्लेटफर्महरू मार्फत तपाईंको डाउनलोड पहुँच गर्न जुनमा तपाईं आफ्ना पुस्तकहरू डिजिटल रूपमा वितरण गर्नुहुन्छ iBooks, अमेजन, गुगल प्ले र केहि अरूहरू। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
भन्दा बढी युवा साहित्य को बीस काम तिनीहरू विस्तृत प्रस्तावको अंश हुन् जुन यो प्रकाशक पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रस्ताव गर्दछ। ती सबै युवाहरूको लागि जो YouTube र नेटफ्लिक्सबाट एक बिट विच्छेदन गर्न चाहन्छन्। पहुँचको लागि लिंकहरू पत्ता लगाउन यो सजिलो छैन, तपाईं पहुँच गरेर तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ सेक्सन "अन्य स्रोतहरू" सेक्सन "संसाधनहरू", प्रत्येक शीर्षकको ट्याबमा उपलब्ध छ। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
यस प्रकाशकले यस मामलामा प्रस्ताव गर्दछ महान साहित्यिक विविधता को १ 14 शीर्षकयी काफी महत्वपूर्ण शीर्षकहरू छन् र to वटासम्म वितरण वितरण प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध हुनेछन्। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
बीस पुस्तकहरू छन् जुन यो चयन गर्दछ प्रकाशकको ​​आधिकारिक वेबसाइटमा PDF ढाँचामा डाउनलोडको लागि नि: शुल्क प्रस्ताव गरिएको। डिस्टोपियन कथाहरू वा पाठबाट आलोचनात्मक तर्क र अझ केहि सुविधाको लागि बच्चाहरूको शीर्षक यस पदोन्नतीको लागि उपलब्ध कोटीहरूको अंश हो। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
पुस्तकहरू निःशुल्क र कानूनीका लागि पहुँच गर्न अन्य तरिकाहरू
यहाँ हामी विस्तार गर्न जाँदैछौं साहित्यिक कार्यहरूको वितरणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू, कि भुक्तान प्रस्ताव को एक असीमित साथ साथै, तिनीहरूसँग निःशुल्क विकल्पहरूको एक विशाल क्याटलग छ। यद्यपि वर्तमान स्थितिको कारण यो पदोन्नती होईन, यो हो केहि जुन हामी सबै वर्ष भर फेला पार्न सक्छौं।
La डिजिटल साहित्य को क्षेत्र मा पार उत्कृष्टता स्टोर, जहाँ हामी निःशुल्क किन्डल ईबुकको एक महान प्रस्ताव पाउन सक्छौं। हाम्रो भाषामा साहित्यको क्लासिक्स, जस्तै काम गर्दछ सर्भेन्टेस, लोर्का वा मिगुएल हर्नान्डेज... आदि हामी पनि फेला पार्न सक्छौं विदेशी काम अनुवाद हाम्रो भाषामा, यद्यपि यदि तपाईं धेरै भाषाहरू जान्नुहुन्छ भने तपाईं तिनीहरूलाई अन्य भाषाहरूमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
अमेजन, नि: शुल्क पुस्तकहरूको एक महान प्रस्ताव संग हुनु को साथै, यदि तपाईं एक अमेजन प्राइम ग्राहक हो भने अझै शीर्षक प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाईं पनि एक खरीद गर्न छुट छ किन्डल पेपरहाइट जुन हामीले पहिले नै समीक्षा गरेका थियौं यहाँ, तपाईंको सबै डिजिटल पुस्तकहरूको मजा लिन।
यस वेबसाइटमा हामी भन्दा बढि फेला पार्न सक्छौं स्पेनिशमा १,18.000,००० पुस्तकहरू ताकि हामी उनीहरूलाई इन्टरनेटबाट परामर्श गर्न सक्दछौं। यो संग १.1,4 मिलियन पुस्तकहरूको लागि विभिन्न भाषाहरूमा पुस्तकहरू। उनीहरूले संगरोधको अवधिमा waitingण प्रतीक्षा प्रक्रिया निलम्बित गरेका छन्। सक्छ सजीलै डाउनलोड गर्नुहोस् दुबैमा धेरै सामग्री पीडीएफ कोमो ePUB, ती शीर्षकहरू जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै आकर्षित गर्दछ, यो लिखित संस्कृतिको एक व्यापक स्रोत हो जुन हामी फेला पार्न सक्छौं। यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
यस अवस्थामा यो मासिक सदस्यता अन्तर्गत भुक्तान सेवा हो, यद्यपि हामी पहुँच गर्न सक्दछौं १--दिन नि: शुल्क परीक्षण। हामी फेला पार्न सक्छौं १००० भन्दा बढी लिखित शीर्षकहरू र अडियोबुकहरू, केहि आरामदायक हुन्छ यदि हामी रातमा हाम्रो आँखा तान्न चाहँदैनौं। यी सबै भन्दा राम्रो विक्रेता, क्लासिक्स र नवीनताहरू बीच समूहीकृत छन्। हामी सँग दुबै आवेदन छ आईओएस कोमो Android। हामी संग छ यहाँ तपाईंको वेबसाइटमा पहुँच गर्नुहोस्।
यहाँ हामी हजारौं क्लासिक्स फेला पार्न सक्छौं जुन स्वतन्त्र रूपमा प्रसारण गर्दछ धन्यवाद लाई सार्वजनिक डोमेन, हामीसँग बिभिन्न शीर्षकहरू छन्। तिनीहरू कोटिहरूमा समूहीकृत छन्। तिनीहरू काल्पनिक सम्बन्धित वा ती हुन् बीचमा विभाजित मद्दत र शिक्षा गर्न डराउने शीर्षकबाट. यहाँ हामी पहुँच गर्न सक्दछौं।
पुस्तक, म्यागजिनहरू र ट्राभल गाइडहरूको वितरणको लागि अर्को सदस्यता-आधारित भुक्तान सेवा। यद्यपि यो एक छ १--दिन नि: शुल्क परीक्षण। को लागी आवेदन छ आईओएस y Android त्यसैले यो यी अपरेटिंग प्रणालीको साथ उपकरणहरूबाट यसलाई पहुँच गर्न हामीलाई सजिलो बनाउँदछ। हामीसँग ट्याब्लेटहरू, ई-बुक रिडरहरू र कम्प्युटरहरूबाट पनि पहुँच हुनेछ। यहाँ हामी तपाईंको वेबसाइट पहुँच गर्न सक्दछौं।
यो समय यो सेवा हो जुन हामीले बजार फेला पार्छौं स्वतन्त्र लेखक जो आफ्नै शीर्षक सम्पादन गर्दछन्। योसँग एक खास सेक्शन छ जसमा ती सबै निःशुल्क डाउनलोड विकल्प सामूहिक छन् डिजिटल ढाँचामा। लगभग सबैलाई कोटीहरूमा विभाजित गरिएको छ, जस बीच हामी भेट्न सक्छौं जीवनी, मानविकी र इतिहास, कविता वा मनोविज्ञान. यहाँ हामी तपाईंको वेबसाइट पहुँच गर्न सक्दछौं।
पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस् र बढ्नुहोस् उनीहरूको क्याफफ्रेज हो। यो sections खण्डमा विभाजित छ,सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू "," PDF मा पुस्तकहरू र पाठहरू "र" तपाइँको पठन सुधार गर्न संसाधनहरू ", पुस्तक चयनको साथ रूचि शीर्षक, निःशुल्क लाइसेन्स पुस्तक र सामग्री प्रस्ताव Creative Commons (यो एक नाफा नकमाउने संस्था हो जसले पहुँच र संस्कृतिको आदानप्रदानको लागि समर्पित हो) जुन ईन्टरनेटमा उपलब्ध छ। यहाँ हामी तपाईंको वेबसाइट पहुँच गर्न सक्दछौं।
हामी इलेक्ट्रोनिक पुस्तकहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं जसले निलो बत्ती स्रोतको उपयोग गर्दैन यसको ब्याकलाईटिंगका लागि यदि हामी रात पढ्न चाहन्छौं किनकि यसले आँखा तनाव र अनिद्रा निम्त्याउन सक्छ। यदि हामीसँग यस प्रकारको उपकरण छैन हामी निलो प्रकाश फिल्टर वा पठन मोड प्रयोग गर्न रोज्न सक्छौं कि अब लगभग सबै उपकरणहरू ल्याउन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » ईरेडरहरू » सबै भन्दा राम्रो साइटहरू नि: शुल्क पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न